Ity no laharana iPad 2019 aorian'ny fampisehoana ireo modely vaovao | Vaovao IPhone
Toa antsika ny zazalahy Cupertino dia nanomana hetsika manokana ho an'ny 25 martsa ho avy izao, hetsika iray izay nikasa ny hanangana ny iPad vaovao ho an'ny taona ny orinasan'i Tim Cook amin'ity taona ity, farafaharatsiny fanavaozana ny iPad 2018, fa araka ny efa nampahafantarinay anao, ireo modely vaovao dia efa misy ao amin'ny App Store.
Apple dia nanidy ny App Store mba hikolokoloana mandritra ny ora vitsivitsy ampio iPad roa vaovao: iPad Air sy iPad Mini. Ity fanavaozana ity koa dia mitaky ny fanjavonan'ny maodely tonga hisolo azy: ny iPad Pro 10,5 sy ny iPad Mini 4. Amin'izao fotoana izao dia tsy naseho ny iPad 2019, ka azo inoana fa tsy havaozina mandritra ity taona ity.
Ary lazaiko fa azo inoana fa tsy havaozina izany satria fomba nentim-paharazana, ny volana martsa dia volana fampisehoana ny iPad, raha ny volana oktobra kosa no aseho ny laharana iPad Pro. Ny maodely iPad Pro 12,9-inch voalohany dia nohavaozina taorian'ny roa taona amin'ny famelabelaranao, ampio ny iPad Pro 10,5-inch.
Herintaona taty aoriana, 2018, nanavao ny maodely 10,5-inch (lasa 11) sy ny 12,9-inch i Apple, mampihena be ny habeny. Amin'ny teôria, amin'ity taona ity tsy tokony ambara ny kinova vaovao, na dia toy ny mahazatra aza dia tsy fantatrao miaraka amin'i Apple mihitsy.
Amin'izao fotoana izao, ny maodely iPad rehetra atolotry ny orinasa anay mifanaraka amin'ny Apple Pencil, na dia amin'ny maodely sasany aza dia tsy afaka mahazo an'io koa isika amin'ny dikan-Pro mazava ho azy.
1.1 Vidiny mini IPad
2.1 Ny vidin'ny IPad 2018
3.1 Ny vidin'ny IPad Air
4.1 Vidiny iPad Pro 2018 kinova Wi-Fi
4.2 Vidiny iPad Pro 2018 kinova Wi-Fi + LTE
5 IPad inona no hovidiko?
6 IPad mini 4 sy 10,5-inch iPad Pro nanjavona
Efa an-taona maro izahay no niresaka momba ny mety hanavaozan'ny Apple na hanafoanana tanteraka ny laharan-jotra iPad, iPad izay tsy novaina efa ho 4 taona. Ny tsaho sasany dia nilaza fa ity maodely ity dia afaka mahita ny haben'ny efijery nitarina, zavatra izay indrisy mbola tsy hitantsika, taorian'io fanavaozana io mbola mampiseho ny endriny mitovy amin'ny taranaka rehetra teo aloha ihany.
Ny zava-baovao atolotry ity maodely ity dia hita ao amin'ny mifanentana amin'ny Apple Pencil. Ho fanampin'izay, ao anatiny dia hitantsika ihany koa ilay mpikirakira A12 Bionic vaovao, ny processeur izay hitantsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny iPhone XS, iPhone XS Max ary iPhone XR, ary koa amin'ny iPad Air izay nohavaozina.
Ny tsaho sasany dia nilaza fa afaka manitatra ny haben'ny efijery amin'ny findainy mora indrindra, ny iPad i Apple, saingy araka ny hitantsika taorian'ity fanavaozana ity dia toa tsy mikasa ny hanavao izany i Apple ary navelany tahaka izany ny maodely. Ny iPad, raha maina, dia tantanan'ny processeur A10 Fusion, processeur iray izay efa teny an-tsena nandritra ny roa taona mahery Ary tokony ho nahazo tarehy tarehy io.
IPad 2018 koa mifanaraka amin'ny Apple Pencil, na dia tsy afaka mivoaka mitovy amin'izany amin'ny maodely Pro aza isika dia mifanaraka amin'ny Logitech Crayon, ilay Apple Pencil mora vidy izay natombok'i Apple mba hampiroboroboana ny fampiasana an'ity maodely ity amin'ny ivom-pianarana.
Ny vidin'ny IPad 2018
Ny vaovao iPad Air Mipetraka eo anelanelan'ny iPad 2018 sy ny iPad Pro 11 mirefy izy, na amin'ny vidiny na amin'ny fampisehoana. Ny iPad Air vaovao dia tantanan'ny A12 Bionic, ilay processeur mitovy hitantsika ihany koa amin'ny mini iPad nohavaozina sy amin'ny iPhone XS, iPhone XS Mac ary amin'ny iPhone XR.
Izy io koa dia mifanaraka amin'ny Apple Pencil ary mahatratra 10,5 santimetatra ny efijery. Ity maodely ity dia ilay manolo ny iPad Pro 10,5-inch, kinova iray izay nisy iray monja ary namidy hatramin'ny ora vitsy lasa izay, satria nosoloiny. Tsy manolotra antsika ny famaritana mitovy amin'ny 10,5, fa mpisolo toerana saika mahavita azy nefa mora vidy kokoa.
Ny vidin'ny IPad Air
Ny taranaka fahatelo an'ny iPad Pro, dia avy amina tanan'ny famolavolana vaovao, famolavolana izay nihena hatramin'ny farany ny sisiny ary nitombo ny tombony, ary koa ny safidy fitahirizana. Ny atin'ny iPad Pro, samy ao amin'ny kinova 11 sy 12,9-inch, dia asehoy anay ny processeur A12X Bionic, kinova mahery kokoa noho izay mety ho hitantsika ao amin'ny iPhone XS, iPhone XS Max ary iPhone XR.
Ankoatra izany, tantanan'ny RAM 4 GB, afa-tsy ny maodely 12,9-inch sy ny fitehirizana 1 TB, izay ny fahatsiarovany RAM dia mahatratra 6 GB. Ity maodely ity no voalohany namely ny tsena tamin'ny fifandraisana USB-C fa tsy ny tselatra nentim-paharazana. Ity seranana ity dia ahafahanao mifandray amin'ny kapila mangirana ivelany mankany amin'ny mpanara-maso, na dia amin'izao fotoana izao aza ny fetra natolotry ny iOS dia tsy mahatonga azy io ho soloina soloin'i Apple fa miverimberina hatrany amin'ny solosaina.
Ny elanelan'ny iPad Pro no lafo indrindra indrindra amin'ny rehetra, satria io no iPad matanjaka indrindra izay hitantsika eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Azo alaina amin'ny kinova ny 64GB, 256GB, 512GB, ary tahiry 1TB ary ny vidiny kinova mora indrindra dia ny maodely 11-inch manana 64 GB: 879 euro.
iPad Pro 12,9 santimetatra 256 GB - 1.269 euro
iPad Pro 12,9 santimetatra 512 GB - 1.489 euro
iPad Pro 12,9 santimetatra 1 TB - 1.929 euro.
iPad Pro 12,9 santimetatra 256 GB - 1.439 euro
iPad Pro 12,9 santimetatra 512 GB - 1.659 euro
iPad Pro 12,9 santimetatra 1 TB - 2.099 euro.
IPad inona no hovidiko?
Raha ny lojika dia miankina amin'ny zavatra ilainao ny zava-drehetra. Raha mila iPad handany atiny amin'ny alàlan'ny streaming na eo an-toerana ianao, zahao ireo tamba-jotra sosialy ary zavatra hafa kely hafa, mety tsara ny iPad 2018, na amin'ny vidiny na amin'ny tombony.
Raha mila iPad mamela anao hiasa sy hankafy mitovy ny fotoam-pialan-tsasatrao ianao, ny iPad Air no safidy tsara indrindra, noho ny fanodinany mahery, azonao atao ny manitsy ny horonan-tsary fialantsasinao na fotoana manandanja indrindra milamina nefa tsy mampiasa solosaina.
Raha mpampiasa mila herinaratra fanodinana faran'izay betsaka ianao, na ny fanovana horonantsary na ny fanovana sary, ampifandraiso amin'ireo fitaovana fitehirizana ireo sary na horonan-tsary na ampifandraiso amin'ny monitor aza. ny maodely tokana ahafahantsika manao izany rehetra izany sy ny maro hafa dia ny iPad Pro.
Ny mini iPad dia safidy izay tsy hitako mihitsy izay mety ho mpihaino azy. Angamba ho an'ireo olona ireo dia mila mitondra azy ireo foana izy ireo nefa tsy mahafoy ny fampiononana amin'ny fahaizany mitondra azy ao anaty kitapony na kitapony nefa tsy tsapantsika fa isika no mitondra izany. Amin'izao fotoana izao, ny haben'ny efijery izay atolotra antsika dia kely loatra noho ny hamaroany, ilay efijery Izy io dia 1,4 santimetatra lehibe kokoa noho ny iPhone XS Max saingy efa ho avo roa heny ny sakany sy ny lavany.
IPad mini 4 sy 10,5-inch iPad Pro nanjavona
Ny fanombohana ny iPad Air sy iPad mini dia mitaky ny fisintonana ireo fantsom-pizarana ofisialy an'ny iPad Pro 10,5-inch sy iPad mini 4. Na dia marina aza izany hatreto, ny iPad mini 4 no iPad ratsy indrindra azonao vidina androany, ny fahafatesan'ny iPad Pro 10,5 dia tsy.
Ny iPad Pro 10,5-inch dia nahatratra ny tsena tamin'ny Oktobra 2017, ary toy izany koa ny iPad Pro 12,9-inch faharoa. Ny iPad Air no solon'ny iPad Pro 10,5-inch, zarao ny haben'ny efijery mitovy aminy, ary na dia matanjaka kokoa aza ilay maodely vaovao, dia tsy manome antsika ny sasany amin'ireo fiasa pro izay tsy misy afa-tsy amin'ity kinova ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ity no laharana iPad 2019 aorian'ny fampisehoana ireo modely vaovao
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Apple Care +, fiantohana vaovao an'i Apple
IOS 6 Beta 12.2, macOS 10.14.4, watchOS 5.2, ary tvOS 12.2 ho an'ny mpamorona